फ्रन्टलाइनमा रहँदा आफै कोरोना संक्रमित बनेका स्वास्थ्यकर्मीको प्रश्न : कता हराउँदैछ मानवता ? | Ratopati
महामारीविरुद्ध उभिने को ?, महामारीसँग जुध्ने को ?
personटुना भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeभदौ १०, २०७७ chat_bubble_outline0
देवप्रकाश भन्छन्, ‘पछिल्लो समय बागलुङ क्याम्पसमा बनाइएको आइसोलेशनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ममाथि थियो । संक्रमितहरुलार्ई राखिएको उक्त आइसोलेशनमा म प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जानु पर्दैैन थियो । नर्सहरु खटिनु भएको थियो संक्रमितहरुको हेरचाहमा । हामी सवैले सुरक्षा सतर्कता अपनाएका थियौं । तर, त्यसो गर्दा गर्दै पनि मलार्ई संक्रमण भयो, कसरी भयो पत्तै नहुने रहेछ ।’
जनैपूर्णिमाको दिन देवप्रकाश आफ्नो घर अमलाचौर पुगेका थिए । उनी भन्छन्, ‘म मोटरसाइकलमा गएँ । मलार्ई थाहा थियो कि मलार्ई संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ त्यसैले गाउँतिर गइनँ । बरु घरमै बसे र डोरो बाँध्न नजिकै मामाघर पुगे । मामाघरमा गएपछि बाहिरै खाना खाएर पुनः बागलुङ बजार नै फर्र्किए । त्यतिबेला मलार्ई सामान्य रुघा अनि ज्वरो देखिन थालेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अस्पतालका दुईजना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पोजेटिभ देखियो । मलार्ई पनि मन्द ज्वरो आइरहेकोले परीक्षण गराउँदा पोजेटिभ देखियो । र तत्काल घर परिवार अनि मामाघरमा सबैलार्ई घरबाट बाहिर ननिस्किन खबर गरें ।’
प्रकाशलार्ई आजभोलि संक्रमित हुनुको भन्दा पनि समाजको चिन्ता बढी छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो समाज त सकारात्मक भैसकेको रहेनछ । खै केही पनि परिवर्तन भएको रहेनछ । मैले सोचेको भन्दा धेरै पछाडि नै घिस्रिदै पो रहेछ मेरो समाज त । जसले अफ्ठ्यारो अवस्थामा साथ र सान्त्वना दिनुको सट्टा उल्टै सट्टा धारे हात लगायो, अपमान र हतोत्साही मात्रै गर्न खोज्यो ।’
नत, अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको पहिचान नखुलाउने भनिएको छ । तर आफू स्वास्थ्यकर्मी भएको र अरुलार्ई सचेत बनाउनुपर्ने दायित्व भएकाले प्रकाशले आफू संक्रमित भएको र आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैले आफूलार्ई आइसोलेट गर्न र परीक्षण गराउन सल्लाह दिए । तर यसरी आमहितको लागि आफू संक्रमित भएको सार्वजनिक गर्दा र त्यसबारेमा अरुलार्ई सचेत गराउँदा आफू र आफ्नो परिवार नै अपमानित हुनुपर्छ भन्ने उनले सोचेकै थिएनन् ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण जोकोहीलार्ई पनि हुन सक्छ । अझ स्वास्थ्यसेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु यसको उच्च जोखिममा छन् । देवप्रकाश स्वास्थ्यकर्मी भएकाले पनि सुरक्षा विधिबारे राम्रो जानकार थिए । घरपरिवारमा सामाजिक दुरी कायम गरेर बसेकाले कसैलाई संक्रमण सर्न नपाएको बताउँछन् ।
प्रकाश ‘आफूले भन्दा पनि परिवारले सहनुपरेको पीडाले पोल्ने गरेको’ बताउँछन् । संक्रमण पुष्टि भएसँगै धौलागिरी अस्पतालको आइसोलेशनमा रहेका प्रकाशका परिवारलार्ई समाजले विभिन्न लान्छना लगायो । ‘सवै सखाप बनायो, सवैलार्ई रोग सारेर गयो’ यस्तै यस्तै अनेकौं लान्छनायुक्त प्रहार उनको परिवारमाथि भयो । परिवारका सवै सदस्य पहिलेदेखिनै क्वारेन्टिनमा थिए । तर समाजले उनीहरुलार्ई हेर्ने नजर बदलियो । उनीहरुमाथि अपराधीको जसरी व्यवहार भयो । ‘गाउँसमाजले रोग लिएर आयो, गाउँभरी सारेर गयो भनेर आरोप लगाए पनि आफूले विशेष सतर्कता अपनाएको’ उनी बताउँछन् । ‘आफूले पूर्ण स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकै कारण परिवार आफन्त तथा सम्पर्कमा आएका कसैमा पनि संक्रमण सर्न नपाएको’ उनको भनाइ छ ।
सम्पर्कमा आएका सवैलाई समयमै सतर्क गराएर परीक्षण गर्दा समुदायमा संक्रमण फैलिन पाएन । प्रकाशको सम्पर्कमा आएका सवैको परिक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै परिवार अनि आफन्तलार्ई केही राहत मिलेको र गाउँसमाज अलि शान्त भएको प्रकाश बताउँछन् ।
आज देशका हरेक फ्रन्टलाइनर चिकित्सक, नर्स, सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु जो संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् तर राज्य तथा समाजको असंवेदनशीलताका कारण उनीहरुमा मात्र निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ । राज्यले उनीहरुको पूर्ण जिम्मेवारी लिएर आत्मबल बढाउन सघाउनुपर्छ जनताको जीवनको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो ।
सुरुदेखिनै कोरोनाभाइरसविरुद्धको अभियानमा अग्रपंत्तिमा खटिएका प्रकाशले कहिल्यै सोचेनन् आफूमा पनि संक्रमण हुन्छ भनेर तर, कहाँबाट सर्यो भन्ने अझै उनले भेउ पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले, सवैलार्ई सतर्क हुन र सुरक्षा सतर्कता अपनाउन उनी धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको आइसोलेशनबाट अपिल गर्छन् ।
भाइरस संक्रमणसँगै टाइफाइडबाट थलिएका प्रकाश आज स्वस्थ भएका छन् । उनमा कोरोना संक्रमणका कुनै पनि लक्षण छैन । परिस्थितिलार्ई सकारात्मक तरिकाले सामना गरेकै कारण आफू स्वस्थ र अझै बलियो बन्दै गएको प्रकाश बताउँछन् । अबको परिक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेमा उनी विस्वस्त छन् । उनी भन्छन्, ‘सकारात्मक सोच, उच्च मनोवल र स्वथ्यकर खानपीनले म कोरोनामुक्त हुँदै गएको छु । छिटै अस्पतालले दिएको जिम्मेवारी सम्हाल्दै विरामीको सेवामा उपस्थित हुन आतूर छु ।’
स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबाल गिराउने खालका क्रियाकलापले उनीहरुको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्ला ?
हामीलार्ई आफ्नै गाउँसमाजले त साथ दिन सक्दैन भने अरु कोसँग सहयोगको अपेक्षा गर्ने ? एकअर्कालार्ई परेको खण्डमा काँधमा काँध मिलाउने हामी नेपालीको स्वाभिमान कहाँ गयो होला ? मर्दापर्दा एकजुट हुने नेपाली संस्कार कहाँ हरायो ? अनेकन प्रश्न कोरोना महामारीले उव्जाएको छ । अनि यस्तै यस्तै प्रश्नहरुको पोको बोकेर स्वास्थ्य सेवामा खटिएकाहरु ज्यानको बाजी लगाएर उभिएकै छन् । के उनीहरुको योगदानको कदरको दुई शब्द खर्चिने हिम्मत हामीमा छैन ? अनि उनीहरुको सम्मान र हौसला प्रदान गर्ने दायित्व हाम्रो होइन ?